काठमाण्डाै – माघ ११ गतेसम्म विभिन्न ५० देशमा रहेका ५६ हजार २६ जना नेपाली कोरोना सङ्क्रमित भएका छन् । यसमध्ये ९५ प्रतिशत अर्थात् ५३ हजार ४ सय ३२ जना सङ्क्रमणबाट मुक्त भएकाे गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएकाे स्वास्थ्य समितिले जनाएकाे छ । विदेशका विभिन्न २० देशमा ३ सय २७ नेपालीकाे काेराेनाकाे कारण ज्यान गएकाे छ ।
खाडीका ६ देश र मलेसियामा अहिलेसम्म १३ लाख ६२ हजार ६३१ जनामा काेराेना सङ्क्रमण भएकाे छ । जसमध्ये १२ लाख ६१ हजार ३९३ जना निकाे भइसकेका छन् भने ९० हजार ३५४ जना उपचाररत छन् । यी देशमा काेराेनाका कारण ज्यान गुमाउनेकाे सङ्ख्या १० हजार ८८४ जना पुगेकाे छ ।
माघ ११ गतेसम्म विश्वका दुई सय १९ देशका ९ कराेड ९३ लाख ६५ हजार ८९ जनामा सङ्क्रमण फैलिसकेको छ । २१ लाख ३१ हजार २८९ जनाको ज्यान गएको छ भने ७ कराेड १४ लाख ३२ हजार ६९९ जना निको भएका छन् ।
सङ्क्रमित सङ्ख्या : १ लाख ४८ हजार ७७२ जना । ( २७ हजार ४१२ नेपालीसहित)
निको भएर घर फिरेकाहरु : १ लाख ४४ हजार ७४० जना ।
अस्पतालमा उपचाररत : ३ हजार ७८४ जना ।
मृतकको संख्या : २४८ जना ।
कतारले तोक्यो श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक, अब करार नसकिंदै पनि काम फेर्न पाइने
भिसा सम्बन्धि व्यवस्था
- कतार आइडीको म्याद थप्न वा अवस्था थाहा पाउन metrash2एप्लिकेसन प्रयोग गर्न र थप नयाँ सूचना तथा जानकारीका लागि कतारको आन्तरिक मन्त्रालयको वेवसाइट हेर्नुहोस् ।
- कतारबाट सरकारले नियमित उडान सुरु गरेकाे छ । तपाईँले अब घर फर्कनका लागि दूतावासकाे सूचीमा भर पर्न पर्दैन । आफ्नो उपयुक्त समयमा आफैं टिकट काटेर फर्कन सकिन्छ ।
सङ्क्रमित सङ्ख्या : २ लाख ७४ हजार ३७६ जना । ( ४ हजार ५०० नेपालीसहित)
निको भएर घर फिरेकाहरु : २ लाख ४७ हजार ३१८ जना ।
अस्पतालमा उपचाररत : २६ हजार २७५ जना ।
मृतकको संख्या : ७८३ जना ।
- यूएई – काठमाण्डौ नियमित उडान भइरहेको छ । अब तपाईँ स्वदेश फर्कन चाहनुहुन्छ भने दूतावासको सूचीमा भर पर्न पर्दैन । आफ्नो उपयुक्त समयमा टिकट लिएर घर फर्कंन सक्नुहुन्छ ।
सङ्क्रमित सङ्ख्या : ३ लाख ६६ हजार १८५ जना (५ हजार २५० जना नेपालीसहित) ।
निको भएर घर फिरेकाहरु : ३ लाख ५७ हजार ७२८ जना ।
अस्पतालमा उपचाररत : २ हजार १०७ जना ।
मृतकको सँख्या : ६ हजार ३५० जना ।
साउदीमा श्रम कानुनमा सुधार : घर फर्कन र कम्पनी फेर्न रोजगारदाताको अनुमति नचाहिने
सङ्क्रमित सङ्ख्या : ९९ हजार ४५६ जना । ( ४५१ जनाभन्दा धेरै नेपालीसहित)
निको भएर घर फिरेकाहरु : ९६ हजार ११२ जना ।
अस्पतालमा उपचाररत : २ हजार ९७७ जना ।
मृतकको सङ्ख्या : ३६७ जना ।
काेराेना सङ्क्रमित सङ्ख्या : १ लाख ६० हजार ९०१ जना । ( २१ सय ५० जना नेपालीसहित)
काेराेना निको भएर घर फिरेकाहरु : १ लाख ५३ हजार ७४६ जना ।
अस्पतालमा उपचाररत : ६ हजार २०३ जना ।
काेराेनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या : ९५२ जना ।
कुवेत सरकारले गरेका नयाँ घाेषणा
दूतावासमा सम्पर्क गर्नुहाेस्
सङ्क्रमित सङ्ख्या : १ लाख ३२ हजार ४८६ जना ।( ३ सय जना नेपालीसहित ।)
निको भएर घर फिरेकाहरु : १ लाख २४ हजार ७३० जना ।
अस्पतालमा उपचाररत : ६ हजार २३९ जना ।
मृत्यु हुनेको सङ्ख्या : १५ सय १७ जना ।
- ओमानमा समस्यामा पर्नुभएको छ तर टिकट काट्ने पैसा नभएर घर फर्कन पाउनुभएको छैन ? यदि यस्तो समस्यामा हुनुहुन्छ भने अब निःशुल्क घर फर्कन फारम भरेर ओमानमा रहेको नेपाली दूतावासमा बुझाउनुहोस् ।​
- कोरोनाको कारण बेरोजगार भएका तथा कम्पनीले कुनै पनि सहयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा भएका र आफैं टिकट किनेर घर फर्कन नसक्ने नेपालीले दूतावासले तोकेको ढाँचा अनुसार फारम भरेर बुझाउन अनुरोध गरिएको छ ।
भिसाको म्याद सकिएकाहरु ओमान फर्कन नपाउने
सङ्क्रमित सङ्ख्या : १ लाख ८० हजार ४५५ जना ।
निको भएर घर फिरेकाहरु : १ लाख ३७ हजार १९ जना ।
अस्पतालमा उपचाररत : ४२ हजार ७६९ जना ।
मृतकको सङ्ख्या : ६६७ जना ।
कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि मलेसियामा सङ्कटकाल घाेषणा
विदेशमा अलपत्र परेर आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कनुभएको छ ? लागेको रकम फिर्ता लिन विभागमा निवेदन दिनुहोस्
नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि दिइने श्रम स्वीकृति र पुन: श्रम स्वीकृति दुवै खाेलेकाे छ ।